Otu esi enweta agụmakwụkwọ mahadum | Nhazi na ọmụmụ ihe
Otu esi enweta agụmakwụkwọ mahadum
Maite Nicuesa | 25/12/2021 23:48 | Emelitere ka 25/12/2021 23:51 | Ọmụmụ ihe
Kedu ka esi enweta agụmakwụkwọ mahadum? Nweta otu Nkuzi akwukwo mahadum ọ bụ ihe mgbaru ọsọ agụmakwụkwọ na, dị ka ọ bụla ọzọ, na-esonyere uru nke atụmatụ. Ọ dị mkpa ka onye mmụta kọwapụta ebumnuche ya wee chepụta atụmatụ mmemme iji mezuo ebumnuche ya. N'ọzụzụ na ọmụmụ ihe anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ bụ isi nke ị nwere ike itinye n'ọrụ.
1 1. Ndụmọdụ dị iche iche oku
2 2. Kwadebe akwụkwọ ahụ tupu oge eruo
3 3. Mụọ ihe iji meziwanye akara ule gị
4 4. Hazie usoro nchọ mmụta mmụta
5 5. Jiri akwụkwọ ndetu dee ozi ọ bụla dị mkpa
1. Ndụmọdụ dị iche iche oku
Ezubere agụmakwụkwọ ọ bụla na profaịlụ ụmụ akwụkwọ akọwapụtara. Profaịlụ kwuru ga-emezurịrị ụfọdụ achọrọ nke akọwara nke ọma na oku a. Ya mere, nyefee ngwa gị n'aka onyinye dị iche iche a na-ezukọ n'ime afọ. Kedu ka ị ga-esi nweta ihe ọmụma ọhụrụ nke akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla? Lelee ozi a site na Gazette Ọchịchị.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịlele ma mahadum ebe ị na-agụ nwere ngalaba e mere iji nye ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ n'isiokwu a. Site na webụsaịtị nke Ministry of Education and Vocational Training, ị nwere ike ịnweta ngalaba mmụta mmụta na enyemaka.
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ chọrọ imezu ebumnuche inweta agụmakwụkwọ mahadum. Ya mere, ị nwere ike ịkọrọ ụmụ klas gị ndị ọzọ ma ọ bụ jụọ ndị ọzọ na-enweta ohere agụmakwụkwọ ị maara na gburugburu gị maka ndụmọdụ.
2. Kwadebe akwụkwọ ahụ tupu oge eruo
Enwere mpempe ozi dị oke mkpa na oku ọhụrụ maka agụmakwụkwọ: ụbọchị njedebe maka ịnyefe ngwa. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, ọ bụrụgodị na onye nyocha ahụ na-emezu ihe ndị dị mkpa iji rịọ enyemaka ahụ, ọnọdụ ndị dị mkpa iji hazie usoro ahụ adịghịzi adị.
Ma mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ịnye ụdị akwụkwọ dị iche iche nke a ga-enye iwu n'ọdịnihu. Ya mere, ahapụla usoro nkwadebe a ruo oge ikpeazụ.
3. Mụọ ihe iji meziwanye akara ule gị
Ndekọ agụmakwụkwọ bụ otu n'ime akwụkwọ ndị nwere ike ịdị oke mkpa mgbe ị na-etinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ. Nke a bụ ikpe mgbe nwa akwụkwọ ahụ ga-enwerịrị akararị elu akọwapụtara. Eziokwu nke na-emekwa mgbe emechara akara ugo mmụta mahadum ma ọ bụrụ na nwa akwụkwọ ahụ malite doctorate.
Ma ị nwere ike itinye akwụkwọ maka enyemaka ahaziri kpọmkwem iji kwado ọrụ ndị nyocha n'oge a. Ya mere, ebumnobi nke inweta agụmakwụkwọ mahadum jikọtara ya na omume dị iche iche enwere ike itinye n'ọrụ n'ime obere oge. Nkwenye kwa ụbọchị maka ọmụmụ ihe bụ isi ihe iji kwalite akara ule.
4. Hazie usoro nchọ mmụta mmụta
Enyemaka kacha mma bụ nke dabara na profaịlụ gị. Enwere oku dị iche iche a na-ewepụta kwa afọ. Agbanyeghị, nwa akwụkwọ anaghị emezu ihe achọrọ iji ruo eru maka agụmakwụkwọ niile ebipụtara. Hazie usoro nhọpụta wee mechie mpaghara ọchụchọ site na enyemaka ndị ahụ dabara na mkpa gị.
5. Jiri akwụkwọ ndetu dee ozi ọ bụla dị mkpa
Site na mgbe nwa akwụkwọ rịọrọ akwụkwọ mmụta, ruo mgbe ebipụtara mkpebi nke ndị na-aga ime, oge na-agafe. Ọ dị mma na ị na-eji akwụkwọ ndetu dee ozi ọ bụla metụtara ebumnuche ịchọrọ imezu. Dịka ọmụmaatụ, ọkwa ọkwa oku ọhụrụ, akwụkwọ ị ga-akwadorịrị, ọrụ na-echere ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa ka ị na-edeba aha scholarships ndị ị tinyere akwụkwọ maka ya. Ma, kwa, atụla anya n'ụzọ na-adịghị mma nsonaazụ oku enwere ike. Adịla nkụda mmụọ tupu oge eruo site n'iji nkwenye na-akpachi anya. Nzọụkwụ mbụ iji nweta ebumnuche agụmakwụkwọ dị mkpa dị otú ahụ bụ ịnwale ya ugboro ole ọ dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Mahadum » Ọmụmụ ihe » Otu esi enweta agụmakwụkwọ mahadum
Kedu ihe ị ga-amụ iji bụrụ onye nlekọta ụlọ
Kedu ka esi amata ma akwadoro nkuzi?